कोइरालालाई अस्पताल लैजान किन आवश्यक ठानिएन ? - inaruwaonline.com
कोइरालालाई अस्पताल लैजान किन आवश्यक ठानिएन ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २६, २०७२ समय: ११:२२:४०
मंगलबार राति सुशील कोइरालाको निधन भयो । तर उनी दुई दिनअघिदेखि बिरामी थिए । उनलाई ज्वरो आइरहेको थियो । सोमबार परेको पानीले वातावरणमा चिसो बढायो । क्रोनिक दमका बिरामी कोइरालालाई त्यसले पनि चाप्यो । उनलाई घरमै नबुलाईजर लगाउँने, अक्सिजन दिएको विषय बाहिरिएको छ । उनलाई चिकित्सकको सुविधा थियो । निजी सहयोगी पनि थिए । तर उनी बिरामी भएको खबर नै नआई एकैपटक निधनको खबरले मंगलबार बिहानै नेपाललाई तरंगीत बनायो । कोइराला बिरामी थिए भन्ने काठमाण्डुका यति धेरै पत्रकारहरुले पनि चाल पाएनन् । एकाध पत्रिकाले उनी बिरामी भएको लेखे । मंगलबार गोरखापत्रले मात्रै कोइरालाको निधनको खबर कभरेज गर्यो ।
सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका सभापति, अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री, संविधान जारी गर्ने बेलाका सरकार प्रमुख, संसारकै गरिब प्रधानमन्त्री भनेर चिनिएका, सादगी र अविवाहीत नेताको रुपमा पनि कोइरालाको पहिचान बनेको छ । तर यी नेता बिरामी भएको खबरसम्म नपाई, कुनै अस्पताल नपुगि एकाएक निधनको खबर आउनु केही अर्थमा स्वभाविक लाग्दैन ।
कोइरालासँग धनसम्पत्ति धेरै थिएन । तर उनले राज्यबाट पाउनु पर्ने सबै पाएका थिए । उपचारमा पनि समस्या थिएन । पटक पटक क्यान्सरको उपचार गर्न उनी अमेरिका जाने गर्थे । त्यसको खर्च उनको आयले धान्दैन थियो । कतै न कतैबाट उनको खर्च राज्यले ब्यहोरिदिन्थ्यो । कोइरालासँग बलियो पार्टी थियो, कार्यकर्ता थिए, कोइरालाको परिवारको विरासतसँग जोडिएका थिए । अहिलेमात्रै होइन गिरिजाप्रसाद कोइरालाकालदेखि नै सुशील सत्ता र शक्तिको वरिपरि थिए । धेरैअर्थमा उनलाई नपुग्दो केही थिएन । तर निधनको संयोगले यी सबैकुराहरुलाई ओझेलमा पारिदियो । किनभने उनको उपचार घरमै गरियो । सुधार आएन । अनि निधन भयो भन्ने जवाफ चित्त बुझ्दो लाग्दैन ।
सामान्य मानिसलाई त बिरामले चाप्दै जाँदा आफन्तले अस्पताल पुर्याउँने खोज्छन् । तर उनलाई अस्पताल पुर्याउँने चेष्टा गरिएन । यसमा खट्किएको कुरो चाहीँ उनको परिवार थिएन भन्ने हो । जसका कारण उनलाई अस्पताल लैजान भएकाहरुले धेरै चासो दिएनन् । अस्पताल पुर्याएर पनि निको नहुन सक्थ्यो, उनको निधन हुन पनि सक्थ्यो, तर एक चरणको प्रक्रिया पूरा हुने थियो । त्यो पूरा भएन भन्ने देखिएको छ । यदि उनको आफ्नै परिवार हुन्थ्यो, स्वास्नी छोराछोरी हुन्थे भने केही फरक अवश्य पथ्र्यो ।
कोइराला हालका सभापति मात्रै होइन, अर्को कार्याकालका लागि पनि तयारीमा थिए भन्ने छ । उनले क्यान्सरलाई जितेको घोषणा पनि गरेका थिए । अमेरिकामा क्यान्सर नरहेको चिकित्सकहरुले बताएपछि केही समय अमेरिकामा घुमफिर गरेर फर्केका पनि हुन् । उनले आफ्नो अस्पष्ट बोली बच्चा भएर होइन रोगका कारण भएको भनेर जवाफ दिएका थिए । उनको यस्तो दावी पछाडि फेरि सभापति हुने चाहना प्रतिबिम्बित हुन्थ्यो ।
चिकित्सक सुन्दरमणि दिक्षित कोइराला आफैले अस्पताल जान नमानेको शंका गर्छन् । उनको शंकामा केही आधार पनि छ । उनी भन्छन्, ‘आफू स्वस्थ भएको दाबी गरिरहँदा महाधिवेसनको मुखमा अस्पताल भर्ना हुँदा रोगी वृद्धले पार्टी चलाउँन सक्दैन भनेर विपक्षीले प्रचार गर्न सक्थे । त्यसकारण उहाँ आफै अस्पताल नजानु भएको हुन सक्छ ।’
चाहे उहाँ आफै नजानु भएको होस वा उहाँका सहयोगीले लापरबाही गरेका हुन्, अस्पताल नजानु कमजोरी भएको डा. दिक्षितको भनाइ छ ।